Ku soo dhawow wakiilka xagga takoorka - DO | DO
Ku soo dhawow wakiilka xagga takoorka - DO
(Välkommen till Diskrimineringsombudsmannen – DO)
Wakiilka xagga takoorka (DO) waa hey’ad dowladeed oo ka shaqeysa sidii loo heli lahaa bulsho aaney takooridi ka dhex jirin. Waxaannu qabannaa hawl ay xukuumadda iyo baarlamaanka Swiidhan noo xil saareen. Halkan waxaa laguugu siinayaa macluumaad aasaasi ah oo ku aaddan takooridda iyo waxa ay DO sameyso iyo sida aad ashtako u sameyn kartid.
Sida sharciga ku cad takooriddu waa wax mamnuuc ah
Xeerka takooriddu wuxuu qofka ka ilaalinayaa in la takooro. Waxay taasi tusaale ahaan ka dhigantahay in shaqa bixiye uusan shaqaalihiisa takoori kari, in jaamacadi aysan ardaydeeda takoori karin iyo shaqaale dukaan uusan macaamiishiisa takoori karin. Qofka hawsha mas'uulka ka ah ayaa sidoo kale mas'uul ka ah in shaqaaluhu uusan shaqada gudeheeda cid kale ku takoorin.
DO waxay ilaalisaa in xeerka takooridda la raaco. Waxaannu xitaa ilaalinaa in shuruucda fasaxa waaliddiinta la raaco. Sida ku cad shuruucda fasaxa waaliddiinta tusaale ahaan lagaama eexan karo markaad fasax waalid geleyso. Hawsheenna waxaa lagu caddeeyey shuruucda ku aaddan wakiilka takooridda.
Toddobada aasaas ee takooridda
Sida ku cad xeerarka takooridda waxaa jira toddobo asaas oo takoorid, waxa loogu yeero aasaasyada takooridda:
aqoonsi iyo tacbiir jinsi ahaaneed
Akhriso wax dheeraad ah oo ku aaddan toddobada aasaas ee takooridda.
Wakiilka takooridda – DO (Faktablad om DO)
Haddii aad qabtid su'aalo ku aaddan takoorid, xeerarka takooridda ama ashtakeyn ku soo dhawaw in aad na soo wacdid ama e-mail noo soo dirtid. Xitaa waannu qabaneynaa ashtakooyin ku aaddan takoorid oo aannu dabadeed shaqadeenna ugu isticmaaleyno tusaale ahaan hubsiimo iyo saameyn.